ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ??? – ADS Myanmar Blog
ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ???
ဒီတစ်ပတ်မှာ သုံးရက်ဆက်တိုက်ရုံးပိတ်တယ်နော်…… အရင်က မိသားစုအတွက် အချိန်သိပ်မပေးဖြစ်ဘူးဆိုရင် အခုလိုပိတ်ရက်များတဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ မိသားစုနဲ့နွေးနွေးထွေးထွေးပိုနေပေးလိုက်ပါ……. အခု www.ads.com.mm ကပြောပြပေးမယ့် အချက်လေးတွေက လွယ်ကူပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်မိသားစုအတွက် အမှတ်တရတခုဖြစ်စေမှာပါ……..
၁. ညဘက် အိပ်ခါနီး အိမ်နေရင်း အဝတ်အစား တွေနဲ့ပဲ “ကားလျှောက်စီးမယ်ဟေ့” ဆိုပြီးတော့ မိုးလင်းပေါက်ဖွင့်တဲ့ ဆိုင်လေးတွေမှာ မုန့်သွာစားပါ…… ကြိုတင်စီစဉ်မထားဘဲ ရုတ်တရက်အသိပေးလိုက်ပါ….. ဒီပုံနဲပ ဘယ်လိုအပြင်သွားမလဲ ….. အင်္ကျီလဲလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောတဲ့ အသံလေးတွေက သင့်ကိုကြည်နူးစေပါတယ်။
၂. ညစာ အတူတကွချက်ပါ။ တစ်ယောက်ကို ဟင်းပွဲတစ်ပွဲ တာဝန်ယူချက်ပြုတ်ပါ။
၃. ဧည့်ခန်းထဲမှာ မိသားစု စုံနေတဲ့အချိန် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို အသံထွက်ပြီးဖတ်ပြပေးပါ။
၄. မိသားစုနဲ့ အတူတကွ အိမ်ရှင်းပါ။ အိမ်ရဲ့ decoration ကို မိသားစုဝင်ရဲ့ အကြံဥာဏ်ကို ယူပြီး တစ်မျိုးပြောင်ကြည့်ပါ။
၅. ကိုယ့်ရဲ့ ခင်ပွန်း၊ဇနီး ဒါမှမဟုတ် သားသမီးတွေနဲ့ တစ်နေကုန် သူတို့လုပ်ချင်တာ အတူလုပ်ပေးပါ။ ( Shopping ထွက်တာ၊ ဂိမ်းဆော့တာ၊ ကျူရှင် လိုက်ပို့ပေးတာ တွေပါ)
၆. Camp ထွက်ပါ။
၈. Puzzle Game ဆော့ပါ
၉. ကျေးရွာဘက်တွေကို လေ့လာရေးသွားပါ။ မြို့ပြထက် လေကောင်းလေသန့်ရပြီး ဗဟုသုတ အသစ်တွေ တိုးပွားစေမှာပါ။
၁ဝ. ကာရာအိုကေ တူတူသွားဆိုပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ သွားနေကျ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ ……. မိသားစုနဲ့ သွားကြည့်တာ့ ဘယ်သူက အဆိုကျော်လဲ ဘယ်သူက ကီးကြောင်လေးလဲဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိသွားတာပေါ့။
၁၁. ပရဟိတ တူတူလုပ်ပါ။ အလှူအကြီးကြီးပေးနိုင်မှ အလှူမဟုတ်ပါဘူး…… မိသားစုတစ်နိုင်တစ်ပိုင် အတူတကွ အဘိုးတွေ အဘွားတွေကို ခေါင်းလျှော်ပေးတာ၊ ကိုယ့် လမ်းထဲက ကလေးတွေ မတတ်နိုင်တဲ့ သူတွေကိုကျွေးမွေးတာ၊ ကိုယ့်နေ့ထိုင်တဲ့ လမ်းလေးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာလေးတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁၂. ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ အခုအားလပ်ရက်မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကို လျှပ်တပြတ်မှတ်တမ်းတင်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ….အဲဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ နောက်ထပ်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်တွေမှာ မိသားစုနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားပေါ်လာပါလိမ့်မယ်
Ads.com.mm ပရိသတ်တွေလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစု အားလပ်ရက်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ…….
ဒီတစပြတမြှာ သုံးရကဆြကတြိုကရြုံးပိတတြယနြော…… အရငကြ မိသားစုအတှကြ အခွိနသြိပမြပေးဖှစဘြူးဆိုရငြ အခုလိုပိတရြကမြွားတဲ့ ရကသြတျတပတတြှမှော မိသားစုနဲ့နှေးနှေးထှေးထှေးပိုနပေေးလိုကပြါ……. အခု http://www.ads.com.mm ကပှောပှပေးမယြ့ အခကွလြေးတှကေ လှယကြူပှီးတော့ ကိုယနြဲ့ ကိုယြ့မိသားစုအတှကြ အမှတတြရတခုဖှစစြမှောပါ……..
၁. ညဘကြ အိပခြါနီး အိမနြရငြေး အဝတအြစား တှနေဲ့ပဲ “ကားလွှောကစြီးမယဟြေ့” ဆိုပှီးတော့ မိုးလငြးပေါကဖြှငြ့တဲ့ ဆိုငလြေးတှမှော မုနြ့သှာစားပါ…… ကှိုတငစြီစဉမြထားဘဲ ရုတတြရကအြသိပေးလိုကပြါ….. ဒီပုံနဲပ ဘယလြိုအပှငသြှားမလဲ ….. အကငျြွီလဲလိုကအြုံးမယဆြိုပှီး တစယြောကတြစပြေါကပြှောတဲ့ အသံလေးတှကေ သငြ့ကိုကှညနြူးစပေါတယြ။
၂. ညစာ အတူတကှခကွပြါ။ တစယြောကကြို ဟငြးပှဲတစပြှဲ တာဝနယြူခကွပြှုတပြါ။
၃. ဧညြ့ခနြးထဲမှာ မိသားစု စုံနတေဲ့အခွိနြ စိတဝြငစြားဖို့ကောငြးတဲ့ ထူးဆနြးတဲ့ အကှောငြးအရာတစခြုခုကို အသံထှကပြှီးဖတပြှပေးပါ။
၄. မိသားစုနဲ့ အတူတကှ အိမရြှငြးပါ။ အိမရြဲ့ decoration ကို မိသားစုဝငရြဲ့ အကှံဉာဏကြို ယူပှီး တစမြွိုးပှောငကြှညြ့ပါ။
၅. ကိုယြ့ရဲ့ ခငပြှနြး၊ဇနီး ဒါမှမဟုတြ သားသမီးတှနေဲ့ တစနြကေုနြ သူတို့လုပခြငွတြာ အတူလုပပြေးပါ။ ( Shopping ထှကတြာ၊ ဂိမြးဆော့တာ၊ ကွူရှငြ လိုကပြို့ပေးတာ တှပေါ)
၆. Camp ထှကပြါ။
၈. Puzzel Game ဆော့ပါ
၉. ကွေးရှာဘကတြှကေို လလေ့ာရေးသှားပါ။ မှို့ပှထကြ လကေောငြးလသနြေ့ရပှီး ဗဟုသုတ အသစတြှေ တိုးပှားစမှောပါ။
၁ဝ. ကာရာအိုကေ တူတူသှားဆိုပါ။ သူငယခြငြွးတှနေဲ့တော့ သှားနကွေ ဖှစခြငွဖြှစမြှာပါ ……. မိသားစုနဲ့ သှားကှညြ့တာ့ ဘယသြူက အဆိုကွောလြဲ ဘယသြူက ကီးကှောငလြေးလဲဆိုတာ ကှဲကှဲပှားပှားသိသှားတာပေါ့။
၁၁. ပရဟိတ တူတူလုပပြါ။ အလှူအကှီးကှီးပေးနိုငမြှ အလှူမဟုတပြါဘူး…… မိသားစုတစနြိုငတြစပြိုငြ အတူတကှ အဘိုးတှေ အဘှားတှကေို ခေါငြးလွှောပြေးတာ၊ ကိုယြ့ လမြးထဲက ကလေးတှေ မတတနြိုငတြဲ့ သူတှကေိုကွှေးမှေးတာ၊ ကိုယြ့နထေို့ငတြဲ့ လမြးလေးကို သနြ့ရှငြးရေးလုပတြာလေးတှေ ပှုလုပနြိုငပြါတယြ။
၁၂. ဓာတပြုံရိုကပြါ။ အခုအားလပရြကမြှာ လုပဆြောငခြကွတြှအေားလုံးကို လွှပတြပှတမြှတတြမြးတငတြာဘဲဖှစဖြှစြ ပှုလုပထြားလိုကပြါ….အဲဒီဓာတပြုံလေးတှကေိုပှနကြှညြ့ရငြးနဲ့ နောကထြပရြုံးပိတရြကရြှညတြှမှော မိသားစုနဲ့ အခွိနကြုနဆြုံးခငွစြိတတြှေ တစဖြှားဖှားပေါလြာပါလိမြ့မယြ
Ads.com.mm ပရိသတတြှလညြေး သာယာပွောရြှငတြဲ့ မိသားစု အားလပရြကလြေးကို ပိုငဆြိုငနြိုငကြှပါစေ…….
Author hsulattPosted on February 11, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ အမှတ်တရအချိန်လေးတွေကိုဘယ်လိုကုန်ဆုံးမလဲ???
Previous Previous post: Valentine Day မှာ ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘာလို့ Chocolateလေးတွေ လက်ဆောင်ပေးကြတာလဲ ?
Next Next post: သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ?